Inozivisa kuvharwa kwayo kweLinux Journal, yekutanga Linux magazini | Linux Vakapindwa muropa
Linux Journal inozivisa kuvharwa kwayo kwekupedzisira
Iyo Linux Journal webhusaiti ichave ichishanda kweinenge vhiki mbiri
Linux Zvinyorwa shambadzo su kuvhara chaiko. Icho chiri pamusoro chimwe chezvinyorwa zvekare yenyika yeLinux.
Muchidimbu chirevo pane yayo webhusaiti iwe unogona kuverenga:
PaAugust 7, 2019, Linux Journal yakavhara madhoo ayo zvachose. Vashandi vese vakadzingwa basa uye kambani inopererwa nemari yekushandisa kuti ienderere mberi. Iyo webhusaiti ichaenderera ichishanda kwemavhiki anoverengeka anotevera, netarisiro kuti yakareba kwenguva yekuchengetedza zvinyorwa kana tichigona kuti izvi zviitike.
-Linux Chinyorwa, LLC
1 Chinyorwa chekupayona
2 Linux Journal inozivisa kuvharwa kwayo kwekupedzisira (kekutanga)
3 Nei Linux Journal ichizivisa kuvharwa kwayo kwekupedzisira (kechipiri)?
Linux Journal ndiyo yaive yekutanga kuburitswa pane iyo Linux kernel uye masisitimu anoshanda akavakirwa pairi. Yako yekutanga nyaya yakabuda munaKurume 1994. Vapepeti vaive vasiri mumwe kunze kwaPhil Hughes naBob Young, vabatsiri veRed Hat, uye yaive naLinus Torvalds.
Kubva munaGunyana 2011 lMagazini yacho yakaburitswa chete mune zvemadhijitari.
Linux Journal inozivisa kuvharwa kwayo kwekupedzisira (kekutanga)
Iyo kambani yakanga yatove nematambudziko uye Muna 2017 yakazivisa kuvharwa kwayo nekushaikwa kwemari yekubhadhara zvikwereti uye mihoro. Nekudaro, chibvumirano neyakavanzika Internet Accesss, sevhisi yeVPN, yakabvumidza kutangwazve kwayo muna 2018.
Kyle Rankin, mupepeti weLinux Journal, anotsanangura zvinokonzeresa kudzima kechipiri.
Zvinosuruvarisa hatipore nekukasira zvakakwana, uye patakaona kuti taifanira kufamba nesimba redu, takatadza. Saka pano tiri kutora yedu yechipiri, zvakanyanya kusanzwisisika, takaonekana. Chii chinoitika izvozvi? Takanyatsombundirana panguva yekuonekana kwekutanga, takambundirana zvekare nguva ino? Isu tinoita here kukwazisana uko kunoshanduka kuita ruoko-ruoko kumbundira? Tinongo kwazisana uye kunyemwerera?
Anotendawo rutsigiro rwemunharaunda rwavakagamuchira panguva iyoyo:
Idzi dzaive nguva dzakaoma, asi isu takazadzwa nerutsigiro rwakawanda kubva kwamuri, vedu vaverengi. Vamwe vanhu vakatibata kuti vatitaurire kuti vaifarira sei magazini iyi uye kusuwa kwavakaita kuona mafambiro ayo. Vamwe vakazvipira kubhadhara zvakanyanya kunyorera kwavo kana kukavabatsira munzira ipi neipi. Vamwe vakatibata kuti tione kana vaigona kugadzira chirongwa chekutsvaga mari yekuchengetedza magazini iyi. Ini handigone kusimbisa kuti kwakadii kuyerera kwerutsigiro kwakatibatsira tese panguva ino yakaoma. Ndatenda.
Ini ndoda kuratidza chimwe chinhu chakanyorwa naKyle panguva yekutanga kwekuvhara
Kusuruvara kwangu kwekuti chimwe chinhu chandakanga ndashanda kwemakore gumi chanyangarika chakatsiviwa nehasha zvekuti nharaunda yeLinux yaiita kunge yarasika nzira. Ndakarasika nzira. Akatora Linux uye yemahara software kurerutswa. Zvaive zvakajeka kwandiri kupfuura nakare kose kuti Ipo Linux uye yemahara software yakanga yakunda muhondo yekurwisa ma tech giants makore gumi apfuura, vatsva vakanga vatora nzvimbo yavo panguva iyi, uye takavarega vachikunda. Kunyangwe ini ndanga ndanyora uye ndataura nezveLinux uye yemahara software kwemakore, uye ndichiishandisa pachangu uye nehunyanzvi, ndainzwa kuti ndakanga ndisina kuita zvakakwana kutsigira chinhu ichi chandainyanya kufunga nezvacho
Nei Linux Journal ichizivisa kuvharwa kwayo kwekupedzisira (kechipiri)?
Sezvo purofesa wangu wekare wehuwandu aishandisa kupwanya, kuwirirana hazvireve kukonzera. Kuvharwa kweLinux Chinyorwa kungangodaro kuri kukonzerwa kupfuura chero chinhu kuchinjika mutsika.
Ndiani achabhadhara magazini kana iwe unogona kuwana izvo zvaunoda zvemahara pane internet? Uye, ngatitaurei chokwadi, kana ukatsvaga zvakanaka, unogona kurodha pasi magazini yaunoda usingabhadhari yuro. Handisi kuti zvakanaka, ndiri kuti ichokwadi.
Asi, kunyangwe kana isina chekuita nekuvhara, chirevo chakaitwa naKyle muna 2017 ichiri chechokwadi. Iyo yemahara software nharaunda yakarasika nzira yayo, uye Microsoft monopoly yakatsiviwa neGoogle / Apple oligopoly pama Mobiles neAmazon pane iro gore.
Nezvinobvira kusarudzika kweRaspberry Pi, iyo yakavhurika sosi yepasi haina kukwanisa kuburitsa chirongwa chinogona kufadza avo vasina kujairana neyakavhurwa uzivi. Hatina WhatsApp kana Facebook. Chatinonyanya kuwana chirongwa chinodhura uye chechinyakare senge freem izvo zvinogona chete kutengeswa nemafungiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Journal inozivisa kuvharwa kwayo kwekupedzisira
inoita 2 makore
Librem haisi yakavhurika sosi, zvirinani kwete zvachose. Zvakawanda zvirinani uye zvakanyanya kuitwa, Lineage OS
Pindura kuna hf
Ivo vane rutsigiro ruzere, ikozvino ini ndine Opensuse uye EndeavorOS, windows havadi kana kana kuchaja.
Pindura kuna juanlinux
LibreOffice 6.3 ikozvino yavapo. Idzi ndidzo nhau
Red Hat Enterprise Linux 7.7 inosvika ine zvakawanda zvinogadziridzwa